Recipe Cooker Slack Cooked Kisoa sy Laisoa (Video) - Fomba Fanamboarana
inona no hatao amin'ny lasopy ovy sisa tavela
taco mafana atsobaka amin'ny hen'omby
lovia mora ovy ho an'ny vahoaka
mila vata fampangatsiahana ve ny cheseecake sopapilla
Recipe Cooker Slack Cooked Kisoa sy Laisoa (Video)
izany Resipeo hena katsaka sy laisoa fonosina rehetra ny matsiro ny henan-katsaka ho sakafo matsaka. Omby sy laisoa malefaka, laisoa, karaoty ary ovy izay masaka amin'ny lafatra ao amin'ny Pot Pot Crock dia mahandro sakafo tsy misy ezaka.
Miresaka momba ny fahatapahan'ny harena tsara amin'ny Andron'i St. Patrick na andro iray amin'ny taona!
Ny fomba fahandro tsara indrindra ho an'ny hen'omby sy laisoa!
Matetika aho no anontaniana hoe 'Inona no fomba fahandro tsara indrindra amin'ny hen'omby sy laisoa?' ary mila miaiky aho fa mizaha tavan'ity nahandro mahandro miadana ity!
izany Resipeo hen'omby sy laisoa Crock Pot Corned no masaka tsara a Cooker miadana 6QT (na lehibe kokoa) satria tena mameno ilay crock. Ampio ovy adiny vitsivitsy ao anaty ny fandrahoana sakafo ny ovy, ka mahandro sakafo mandritra ny 5-6 ora izy ireo, mba tsy ho mora volo. Ampio ny laisoa adiny 2 alohan'ny handaminana ny sakafo.
Raha mbola tsy nanao hen'omby katsaka ianao taloha dia mora ny manamboatra azy fa zava-dehibe ny mitadidy fa ny hen'omby katroka (sy ny tratra omby amin'ny ankapobeny) dia hena voapaika henjana mandra-masaka tsara. Raha henjana izy dia tsy nahandro naharitra ela be fotsiny, avelao ao anaty vilany miadana ary omeo fotoana bebe kokoa.
Alohan'ny hanapahana dia tianao foana ny mamela ny hen'omby misy anao satria io no tsiambaratelo amin'ny hena tapaka. Rehefa avy nitsahatra, manapaka ny voam-bary hiteraka henan'omby katsaka izay be ranony kokoa, malefaka sy fork ary manome tsiro kokoa ..
Misy toro-hevitra vitsivitsy tena ilaina tokony ho fantatrao rehefa manao recette brisket (ao anatin'izany ny recette henan'omby mihinana katsaka).
Fomba fahandro ny henan-katsaka mba hahamendrika azy
Ambany sy miadana: Brisket dia tapaka hena henjana ary hahazoana ny vokatra tsara indrindra dia tokony ho masaka ambany sy miadana. Amin'ity fomba fahandro ity dia ampiasaiko ny mahandro miadana ary azoko antoka fa hampiasa ilay toerana ambany aho.
Omeo fotoana izy io: Miverina any amin'ny 'miadana'… ity resipeo ity dia mitaky maharitra 8-10 ora ary matetika ny ahy dia manakaiky ny 10. Raha henjana ny hen'omby misy anao dia betsaka ny mety tsy nahandro ela loatra.
Ajanony ny henao: Toy ny ankamaroan'ny hena, avelao izy hiala sasatra mandritra ny minitra vitsy alohan'ny hikororohana.
Hetezo ny voa: Brisket dia manana kofehin'ny fibrous lava ka tena ilaina tokoa ny manapaka ny voa. Raha ny marina dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ity resipe ity ity !!
akoho nofenoina ham sy mozzarella
Inona no zava-manitra mandeha amin'ny hen'omby?
Toro-katsaka dia brisket hen'omby izay efa sitrana sy namboarina. Rehefa amidy dia matetika efa tonga efa zatra na miaraka amina fonosana mofomamy. Ny zava-manitra dia misy zava-manitra manitra tsara tarehy toy ny spice manontolo, sakamalaho, voan-tsinapy, voanio ho an'ny vitsivitsy. Raha tsy manana ny zava-manitra ny hen'omby misy anao dia azonao atao ny manampy tablespoons roa zava-manitra pickling , sakamalaho vitsivitsy sy ravina bay. Afatory ao anaty cheesecloth izy ireo ary atsipazo ao anaty vilany tsy miova.
St. Patrick's Day no fotoana mety indrindra hankafizana fomba fahandro mora miadana toy ny Corned Beef sy Cabbage. Ny fampiasana vilany crock dia mahatonga an'io sakafo io tsy ho vita!
izany Resipeo hen'omby sy laisoa Cooker Corner Cooker mamorona iray karazana sakafo hariva matsiro sy mahafinaritra izay tian'ny fianakavianao! Satria efa sakafo feno io dia matetika no arosonay Horonana fisakafoanana 30 minitra na Biscuits dibera vita amin'ny dibera mora sy salady tsotra.
Manana fahatsapana tianao hatao amin'ity taona ity aho! Ity resina henan'omby sy laisoa ity mora ity dia misy sakafo feno ao anaty iray, hen'omby matroka, ovy, karaoty mamy ary laisoa.
Favorite Irlandey bebe kokoa
Stew zanak'ondry (Stew irlandey) - Manankarena sy manome tsiro tokoa!
Ahoana ny fomba fandrahoana hen'omby (Tendrombohitra ambony) - Ny dikan-tampon'ny fatana!
Mofo Soda Irlandey - lafiny lafatra, tsara ho an'ny lasopy sy lasopy!
Recipe Colcannon (laisoa sy ovy) - Ny sakafo fiononana faratampony!
Ny tiako indrindra Ruby Sandwich - Ny an-trano no tsara indrindra!
Omby sy laisoa Cooker Corner Cooker miadana
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo8 ORA Fotoana manontolo8 ORA 10 minitra Fanompoana6 servings MpanoratraHolly N. Ity fomba fahandro Corned Beef sy Cabbage Slow Cooker ity dia mametaka ny tsiron'ny hen'omby katsaka ho sakafo matsaka. Miresaka momba ny fahatapahan'ny harena tsara amin'ny Andron'i St. Patrick na andro iray amin'ny taona!
▢1 brisket hen'omby 3-4 pounds
▢3 jirofo tongolo gasy
▢rOA ravina bay
▢2 ½ - 3 kaopy rano
▢rOA kilao ovy voahitsaka & quartered
▢rOA karaoty lehibe voatetika
▢1 lohan'ny laisoa kely tapaho ho wedges
Tetehina anaty tongolobe lehibe ny tongolobe ary apetraho ao ambanin'ny vata fandrahoana miadana 6 qt. Ambony miaraka amina henan'omby matsatoka sy fonosana.
Araraka ao anaty vilany tsy miadana ny rano mandra-pahafoany ny hen'omby katsaka. Manampia tongolo gasy sy ravina bay.
Andrahoy amin'ny ora ambany 8-10.
Aorian'ny adiny 3 voalohany dia ampio ovy sy karaoty amin'ny vata fandrahoana miadana.
Roa ora alohan'ny hanompoana azy dia ampio amina laisoa amin'ny lafaoro miadana.
Esory amin'ny hena miadana ny hen'omby matroka ary avelao hiala sasatra 15 minitra alohan'ny hikolokoloana. Aroso miaraka amin'ny ovy, karaoty ary laisoa.
Raha vantany vao masaka ny hen'omby misy anao dia tokony ho malefaka (ny ahy matetika mahandro akaikin'ny 10 ora). Mety miovaova ny fitaovana, raha tsy malefaka ny hen'omby misy anao dia mety mila lava masaka kokoa. Ilaina tokoa ny manapaka ny henak'omby misy anao amin'ny voa. Ny fampahalalana momba ny sakafo omena dia tombatombana ary hiova arakaraka ny fomba fahandro sy ny marika fangaro ampiasaina.
Kaloria:592,Karbohidraty:32h,Proteinina:39h,Tavy:3. 4h,Tavy voky:10h,Cholesterol:122levitra,Sodium:2817levitra,Potasioma:1653levitra,Fibre:8h,Sugar:6h,Vitamina A:3545IU,Vitamina C:136.9levitra,Kalsioma:135levitra,Vy:9.5levitra
Teny lakilehen'omby sy laisoa katsaka Mazava ho azysakafo hariva masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Avereno ity Recipe Cooker Slow ity
aiza no ahafahako mividy alaska voaendy